I-China Airbrush BT-105 umzi-mveliso nabavelisi | IBHOLA
Intengiso eshushu yeZinto eziNinzi zeNjongo yokuSetyenziswa kweMoya yebrashi yeTrans ...
I-Multi-yeNjongo yeMini yoMoya oMncinci woCwangciso lweeMo ...
Amanyathelo aphindwe kabini okhupha isipha seSitshisi seGun lisetyenziselwa umzimba ...
I-Airbrush Makeup Kit nge-Mini Air Compressor eyodwa ...
Uhlobo logcino: Umdaniso
I-Dizzle Eqhelekileyo Dia.:0.3mm
Umthamo weNdebe: 20cc
Ingcinezelo yokusebenza: 15-50psi
I-Trigger Air- yepeyinti yokupeyinta eyedwa.
Ubukhulu beCarlon (cm): 40.5 * 36 * 31.5
I-PCS / i-CTN: 30
I-NW / GW: 11 / 13kg
BT-105 Inzulu Iseti yebrashi Ukusebenza ngokwahlukeneyo kunye neNqanaba eliphezulu lokuSebenza
● IKHAYA LOKUGQIBELA I-AIRBURSH KIT: I-Dual-air-paint control Airbrush gun. Ivumela abasebenzisi ukuba babone ubungakanani bomoya kunye nolwelo olukhutshwa ngokuhamba nje kweminwe. Nikeza i-atomization enkulu kunye nolawulo olululo.
● UKUQINISA UMGANGATHO: Umpu webrashi yokutshiza yomoya wenziwe wonke ngobhedu olusemgangathweni kwaye uza neenaliti zensimbi engenanto. Umsebenzi obalaseleyo, osebenzayo ngokulula.
● UKUFUMANELEKILEYO KWE-MULTI: I-airbrush iseti iza neenaliti ezi-3 ezahlukeneyo kunye ne-nozzles (0.2 / 0.3) kunye ne-airbrush hose. Ungasebenzisa inaliti eyahlukileyo ukwenza impazamo entle oyifunayo. Ihluza uluhlu olupheleleyo lwempembelelo ezivela kokuhle kakhulu ukuya kwelahleko ebambekayo. Dibana nazo naziphi na iimfuno zakho.
Edlulileyo: I-China yexabiso eliphantsi i-Nozzle, i-Airbrush Jy-5716b Yabelana-Imibala emhlophe ye-Airbrush encinci ye-GT BT-105 eSebenzayo isixhobo sokuSebenzisa isixhobo sokuLungiselela ikhekhe-iBOLT.
Okulandelayo: I-Airbrush BT-130
Yenza ibrush yebrashi
Umbala omhlophe Umbala omncinci we-Airbrush Gun BT-105 Iphathekayo ...
Izinto ezininzi zeNjongo eziMbini zoMlo oShukumayo we-Air ...
I-BT-131 isenzo esiDibeneyo esingu-0.3mm Nozzle Spray Painting ...
Ukuthengisa okutshisayo i-0.4mm isenzo esisodwa i-Airbrush Sprayer T ...
BT-132 Amanyathelo aphindwe kabini aSetyenziselwa ukuGqibezela uGun ...